4 Dariiqo oo Barashada Mashiinka ay u kobcinayso Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada | Martech Zone
Iyada oo dad badani ay ku lug leeyihiin shabakadaha internetka ee internetka maalin kasta, warbaahinta bulshada ayaa noqotay qayb lama huraan u ah xeeladaha suuqgeynta ee ganacsiyada noocyadooda kala duwan.
Waxaa jiray 4.388 bilyan oo isticmaaleyaasha internetka adduunka oo dhan sanadka 2019, iyo 79% ka mid ah waxay ahaayeen isticmaaleyaal bulsho oo firfircoon.
Warbixinta Caalamiga ee Dijitaalka
Markii istiraatiijiyad ahaan loo adeegsado, suuqgeynta warbaahinta bulshada waxay gacan ka geysan kartaa dakhliga shirkadda, ka qeybqaadashadeeda, iyo wacyigelinta, laakiin si fudud u noqoshada baraha bulshada macnaheedu ma aha in la isticmaalo dhammaan waxyaabaha ay baraha bulshada ku hayaan dukaamada. Xaqiiqda dhabta ah waa sida aad u isticmaasho marinnada bulshada, waana halkaas halka laga yaabo in fursadaha lagu muujiyo barashada mashiinka.
Waxaan maraynaa qarxinta xogta, laakiin xogtaan waxba ma tarayso ilaa la falanqeeyo mooyee. Barashada mashiinka ayaa suurtogal ka dhigeysa in la falanqeeyo noocyada xogta aan xadidneyn oo la helo qaabab ku qarsoon gadaashooda Caadi ahaan la geeyo iyadoo la kaashanayo lataliyayaasha barashada mashiinka, Teknolojiyadaani waxay hagaajineysaa habka xogta loogu beddelo aqoonta waxayna u saamaxdaa ganacsatadu inay sameeyaan saadaalin sax ah iyo go’aamo ku saleysan xaqiiqda
Kuwani dhammaantood maahan faa'iidooyinka, markaa aan si dhow u eegno dhinacyada kale ee ganacsiga ee lagu horumarin karo barashada mashiinka.
1. Dabagalka Sumcadda / Dhageysiga Bulshada
Ku guuleysiga ganacsiga maanta waxaa go'aamiya dhowr arrimood, waxaana laga yaabaa in mid ka mid ah kuwa ugu saameynta badan ay ka mid yihiin sumcadda internetka. Sida laga soo xigtay Sahanka Dib u Eegista Macaamiisha Deegaanka, 82% macaamiisha ayaa fiiriya dib u eegista internetka ee ganacsiyada, iyada oo aqrin kastaa 10 dib u eegis celcelis ahaan kahor intaanay aaminin ganacsi. Tani waxay cadeyneysaa in faafinta wanaagsan ay muhiim u tahay sumadaha, taasi waa sababta ay fuliyayaashu ugu baahan yihiin inay helaan hab ay ku maamulaan sumcadda ganacsiga si wax ku ool ah.
La socodka calaamaduhu waa xalka ugu fiican, kaas oo ah raadinta wixii sheegitaan ah ee astaan ​​ah dhammaan ilaha la heli karo, oo ay ku jiraan warbaahinta bulshada, shirarka, baloogyada, dib u eegista internetka, iyo qodobbada. U oggolow ganacsiyada inay ogaadaan dhibaatooyinka ka hor intaanay u kicin mashaakil isla markaana falcelin ku sameeyaan waqtiga, kormeerka calaamaddu wuxuu kaloo siiyaa hawl wadeennada fulinta faham buuxa oo ku saabsan bartilmaameedyadooda bartilmaameedka, sidaas awgeedna waxay gacan ka gaysataa go'aan qaadashada wanaagsan.
Sidee Barashada Mashiinku u Caawiyaa La-Socodka Calaamadaha / Dhageysiga Bulshada
Iyada oo aasaas u ah falanqaynta saadaalinta, barashada mashiinka waxay gacan ka geysaneysaa go'aan qaadayaasha si buuxda u fahmaan dhammaan howlaha ka socda shirkadooda, si markaa go'aanadooda ay u noqdaan kuwo xog urursi iyo macaamiil u janjeedha, sidaasna waxtar u leh.
Hadda ka fikir dhammaan sheegisyada meheraddaada ee laga heli karo khadka tooska ah-imisa ka mid ah ayaa jiri doona? Boqolaal? Kumanaan? Aruurinta iyo falanqaynta iyaga gacanta ayaa ah wax dhib ah oo la maareyn karo, halka barashada mashiinka ay dedejineyso howsha isla markaana ay bixinayso calaamadeynta ugu faahfaahsan
Ilaa macaamiisha aan faraxsanayn ay toos kula soo xiriiraan taleefan ama emayl, habka ugu dhakhsaha badan ee lagu helo loona caawiyo waa falanqaynta dareenka - dejinta algorithms-ka barashada mashiinka ee qiimeeya aragtida dadweynaha ee ku saabsan ganacsigaaga. Gaar ahaan, tixraacyada sumadda waxaa lagu sifeeyaa macno taban ama mid togan si meheraddaadu si dhakhso leh uga falceliso kiisaska saamaynta ku yeelan kara astaantaada. Diritaanka barashada mashiinka ayaa u oggolaanaysa ganacsiyada inay la socdaan fikradaha macaamiisha iyadoon loo eegin luqadda ay ku qoran yihiin, taasoo ballaarinaysa aagga kormeerka.
2. Bar-tilmaameedka Cilmi-baarista Dhagaystayaasha
Faahfaahinta khadka tooska ah waxaa laga yaabaa inay u sheegto waxyaabo dhowr ah, sida da'da milkiilaha, jinsiga, goobta, shaqadiisa, hiwaayadaha, dakhliga, caadooyinka wax iibsiga, iyo waxyaabo kale oo badan, taas oo ka dhigaysa baraha bulshada il aan dhammaad lahayn oo ganacsatadu u ururiyaan xogta ku saabsan macaamiishooda hadda iyo dadka cidda ay jeclaan lahaayeen inay la shaqeeyaan. Marka, maareeyayaasha suuqgeynta waxay helayaan fursad ay ku bartaan dhagaystayaashooda, oo ay kujirto habka loo isticmaalo alaabada ama adeegyada shirkadda. Tani waxay fududeyneysaa habka lagu raadinayo cilladaha alaabta waxayna muujineysaa siyaabaha wax soo saarka loo horumarin karo.
Tan waxaa sidoo kale lagu dabaqi karaa cilaaqaadka B2B: iyadoo lagu saleynayo shuruudaha sida cabbirka shirkadda, dakhliyada sanadlaha ah, iyo tirada shaqaalaha, macaamiisha B2B waxaa loo qaybiyaa kooxo, sidaa darteed iibiyuhu uma baahna inuu helo hal-ku-habboon-dhan xalka laakiin bartilmaameedsada qaybaha kala duwan adoo adeegsanaya qaab ugu haboon koox gaar ah.
Sidee Barashada Mashiinku U Caawiyaa Bartilmaameedka Cilmi-baarista Dhagaystayaasha
Khabiirrada suuqgeynta waxay leeyihiin xog aad u tiro badan oo ay wax ka qabtaan - oo laga soo ururiyey ilo dhowr ah, waxay u muuqan kartaa mid aan dhammaad lahayn marka ay timaado muujinta macaamiisha iyo falanqaynta dhagaystayaasha. Iyagoo adeegsanaya barashada mashiinka, shirkaduhu waxay fududeeyaan habka lagu falanqeynayo marinnada kala duwan iyo soo saarista macluumaad qiimo leh iyaga. Sidan, shaqaalahaagu waxay isticmaali karaan xog diyaarsan si ay ugu tiirsanaadaan markay kala qaybinayaan macaamiisha.
Sidoo kale, algorithms-ka barashada mashiinka ayaa muujin kara astaamaha habdhaqan ee kooxdan ama kooxda macaamiisha ah, taas oo siinaysa shirkadaha fursad ay ku saadaaliyaan saadaalin dheeri ah oo ay u adeegsadaan kuwa ugu faa iidaysan istaraatiijiyadooda.
3. Aqoonsiga Sawirka iyo Muuqaalka
Sanadka 2020, aqoonsiga muuqaalka iyo fiidiyowgu wuxuu u yimaadaa sidii tikniyoolajiyad soo ifbaxaysa oo lagama maarmaan u ah dhammaan shirkadaha doonaya inay yeeshaan tartan tartan ah. Warbaahinta bulshada, iyo gaar ahaan shabakadaha sida Facebook iyo Instagram, waxay bixiyaan tiro aan xadidnayn oo sawirro iyo fiidiyowyo ah oo ay soo dhigayaan macaamiishaada mustaqbalka maalin kasta, haddii aysan ahayn daqiiqad kasta.
Ugu horreyntii, aqoonsiga sawirku wuxuu u oggolaanayaa shirkadaha inay aqoonsadaan alaabada ay jecel yihiin dadka isticmaala. Iyada oo macluumaadkan la tixgeliyo, waxaad awood u yeelan doontaa inaad si wax ku ool ah u beegsato ololeyaasha suuqgeynta si aad u kacdo oo aad u iibiso haddii qofku horey u isticmaalayo sheygaaga, kuna dhiirrigeli inay isku dayaan qiimo soo jiidasho leh haddii ay isticmaalayaan alaabada tartame. . Sidoo kale, tikniyoolajiyaddu waxay gacan ka geysaneysaa fahamka bartilmaameedkaaga, maaddaama sawirrada mararka qaarkood laga yaabo inay wax badan uga sheegaan qofka dakhligiisa, goobta uu ku sugan yahay iyo waxyaabaha uu xiiseynayo marka loo eego astaanta liidata ee la buuxiyay.
Qaab kale oo ganacsatadu uga faa'iideysan karaan aqoonsiga muuqaalka iyo fiidiyowga ayaa ah helitaanka qaabab cusub oo badeecadooda loo isticmaali karo. Internetka maanta waxaa ka buuxa sawirro iyo fiidiyowyo dad sameeya tijaabooyin oo sameeya waxyaabo aan caadi ahayn iyagoo adeegsanaya waxyaabaha ugu badan ee habka cusub - haddaba maxaad uga faa'iidaysan la'dahay?
Sidee Barashada Mashiinku u Caawiyaa Aqoonsiga Sawirka iyo Muuqaalka
Barashada mashiinku waa qayb lama huraan u ah sawirka iyo aqoonsiga fiidiyowga, taas oo ku saleysan tababar joogto ah oo laga yaabo inay suuragal tahay kaliya iyadoo la adeegsado algorithms sax ah iyo sameynta nidaamka xusuusta qaababka.
Weli, sawirrada iyo fiidiyowyada u muuqda kuwo waxtar leh marka hore waxay u baahan yihiin in laga dhex helo tiro aad u tiro badan oo macluumaad ah oo laga heli karo baraha bulshada, waana marka barashada mashiinka ay sahlayso howlgalka aan gebi ahaanba suurtagal ahayn haddii gacanta lagu qabto. Lagu xoojiyay tiknoolajiyada barashada mashiinka horumarsan, aqoonsiga muuqaalka wuxuu kobcin karaa ganacsiyada heer gebi ahaanba cusub oo bartilmaameed ah, iyadoo la siinayo aragtiyo gaar ah oo ku saabsan macaamiisha iyo habka ay u isticmaalaan wax soo saarka.
4. Beegsiga Macaamiisha iyo Taageerida Wadada Wadahadalka
Dad aad u tiro badan ayaa maanta u aqoonsanaya farriinta inay tahay habka ugu habboon ee bulsheed, taas oo shirkadaha siinaysa fursado cusub oo ay kula macaamilaan macaamiisha. Iyada oo ay sii kordhayaan wada sheekaysiga guud ahaan iyo barnaamijyada lagu sheekeysto sida WhatsApp iyo Facebook Messenger, sheekooyinku waxay noqonayaan aalad suuq geyn wax ku ool ah — waxay ka baaraandegaan macluumaadka nooc kasta leh waxayna u adeegi karaan inay ka jawaabaan codsiyo kala duwan: laga bilaabo su'aalaha caadiga ah illaa hawlaha ku lug leh tiro ka mid ah doorsoomayaasha.
Si ka duwan xiriiriyeyaasha marin-u-socodka ee caadiga ah iyo bogagga shabakadaha, sheekooyinku waxay siiyaan dadka isticmaala awood ay ku baaraan oo ay ku sahamiyaan iyagoo adeegsanaya shabakad bulsheed ama barnaamij fariin ah oo ay doorbidaan. Iyo in kasta oo suuq-geynta dijital ah ee caadiga ahi ay ku lug yeeshaan sawirrada, qoraalka, iyo fiidiyowga, bots-ka ayaa u fududeynaya noocyada inay si toos ah ugu xirmaan macaamil kasta oo ay u dhisaan wadahadal shakhsiyeed oo u eg aadanaha.
Chatbotyada waxaa lagu soo kordhiyay Barashada Mashiinka
Inta badan sheekooyinku waxay ku shaqeeyaan algorithms-ka barashada mashiinka. Hadday chatbot tahay hawl u janjeedha, hase yeeshe, waxay adeegsan kartaa barnaamijyada neerfaha-luuqadeed iyo xeerarka si loogu gudbiyo jawaabo habaysan oo ku saabsan codsiyada guud ee guud iyada oo aan loo baahnayn barashada mashiinka inay taageerto awooddeeda aasaasiga ah.
Isla mar ahaantaana, waxaa jira sheeko sheeko xambaarsan xog-la saadaalin karo-oo u shaqeyneysa sidii caawiyeyaal caqli badan, waxay wax ku bartaan socodka si ay u bixiyaan jawaabo iyo talooyin la xiriira, qaarkoodna xitaa waxay ku dayan karaan shucuurta. Sheekooyinka xogta lagu kiciyo waxaa ku shaqeeya barashada mashiinka, maadaama ay si joogto ah u tababaran yihiin, u kobcayaan una lafa gurayaan dookha isticmaalayaasha. Isku soo wada duuboo, xaqiiqooyinkani waxay ka dhigayaan isdhexgalka dadka isticmaala meheradda mid shaqsi ah: weydiinta su'aalaha, bixinta macluumaadka la xiriira, u damqashada, iyo kaftanka, sheekooyinka loo yaqaan 'chatbots' waxay ka codsadaan wixii aan ka gaari karin xayeysiis dhaqameedyada.
Iyada oo loo yaqaan 'chatbots' caqli badan, ganacsiyada ayaa ka caawin kara macaamiil tiro aan xad lahayn meel kasta iyo goor kasta oo ay joogaan. Keydinta lacag iyo waqti iyo hagaajinta khibrada macaamiisha, sheekooyinka ayaa noqda mid ka mid ah meelaha ugu faa iidada badan AI si ay u maal gashadaan ganacsiyada iyo shirkadaha dhex dhexaadka ah.
Tags: aisirdoonka macmalb2bqaababka habdhaqankakormeerka sumaddasumcad sumadeedbarashada mashiinka chatbotsheekooyinkabartilmaameedka macaamiishatikniyoolajiyadda soo baxdawarbixin caalami ah oo caalami ahaqoonsiga sawirkabarashada mashiinka aqoonsiga sawirkacaawiye caawiyebarashada mashiinkakormeerka sumadda barashada mashiinkabarashada mashiinka dhageysiga bulshadamashiinka barashada warbaahinta bulshadafalanqaynta saadaalintataageerada macaamiisha bulshadaMedia Social Suuqbeegsiga baraha bulshadabartilmaameedka cilmi baaristaaqoonsiga fiidiyowgabarashada mashiinka aqoonsiga fiidiyowga